ဂုဏ်ယူစရာ Paris ပါရစ်နေ မြန်မာပြည်ဖွား ဒေါ်ရင်ရင်မြင့် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » ဂုဏ်ယူစရာ Paris ပါရစ်နေ မြန်မာပြည်ဖွား ဒေါ်ရင်ရင်မြင့်
ဂုဏ်ယူစရာ Paris ပါရစ်နေ မြန်မာပြည်ဖွား ဒေါ်ရင်ရင်မြင့်
Posted by Kyaemon on Dec 9, 2013 in Education, Literature/Books, Society & Lifestyle, Travel |5comments
Daw Yin Yin Myint Education France Paris
လိုက်ကြည့်တာ တော်တော်ပင်ပန်း မျက်စိညောင်း သွားပုံရတယ်၊
ကြည့်စရာတွေလဲ အများကြီး ရှိပါသေးတယ်၊
ယင်း မြို့တော်ပါရစ်မှာ၊ မြန်မာနဲ့ပြင်သစ် သမတ နှစ်ဦးတို့က
ဘာတွေဆွေးနွေးခဲ့တယ် ဘာတွေအောင်မြင်ခဲ့တယ် ဆိုတာကို
မသိရသေးသူတွေအတွက် အောက်ပါ သတင်းလေးကို
Thursday, 18 July 2013 16:37
မြန်မာ့ ကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေး ကဏ္ဍများတွင် အကူအညီ ပေးမည်ဟု ပြင်သစ် ကတိပြု
မြန်မာလို link လင့်ခ
….သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်မှာ ဗြိတိန်နိုင်ငံ ခရီးစဉ်အပြီးတွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး၊
သူ၏ ပထမဆုံး ပြင်သစ် ခရီးစဉ်လည်း ဖြစ်သည်။
အနောက်ဥရောပမှ နောက်ထပ် အထောက်အပံ့များနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
ရည်ရွယ်၍ ဥရောပ ခရီးစဉ်ကို ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေး ကဏ္ဍများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာစေရန်
မြန်မာနိုင်ငံအား အကူအညီပေးရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း
တစ်နာရီခန့် ကြာမြင့်သည့် ဆွေးနွေးပွဲတွင်
ပြင်သစ် သမ္မတ က မြန်မာ သမ္မတအား ပြောကြားခဲ့သည်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ အခြေခံ အဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ရေး၊
စသည့် ကဏ္ဍများမှ စီမံကိန်းများတွင်
ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း ပြင်သစ် မီဒီယာများက ဆိုကြသည်။
ပြင်သစ်သမ္မတ Hollande နှင့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က မတွေ့ဆုံမီကလည်း
မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် ပြင်သစ် ဝန်ကြီးချုပ် Jean-Marc Ayrault အပြင်
စီးပွါးရေး ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်လည်း တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ညာဘက်မှာထိုင်ပြီး မြန်မာလိုဝတ်စုံနဲ့ အမျိုးသမီးက ဒေါ်ရင်ရင်မြင့်ပါ၊
အထူး ဂုဏ်ယူ ချီးကျူးရပါကြောင်း၊
လွန်စွာမှ အရေးပါ တဲ့ ကဏ္ဍမှာ
နယ်ဘက် အရပ်ဘက်မှာ စွမ်းဆောင်တာ၊အောင်မြင်တာတွေကို
တိုင်းပြည်အရေး၊နိုင်ငံအရေး အတိုင်းအတာ အနေနဲ့ဆိုရင်
ဖော်ပြပါလို ဘာသာပြန်တာ တခုထဲ မဟုတ်၊
မြန်မာဒ္ဒါ ကျမ်းစာအုပ် တွေကို၎င်း
အရှင် အာနန်ဒါ Rev V Lustig က မြန်မာကဗျာလက်ရွေးစဉ်တွေကို
မြန်မာယဉ်ကျေးမှုကိုကမ်ဘာ စင်မြင့်ပေါ်သို့ ပွဲတင်မိတ်ဆက်ပေးသလို၊
အပေါ်က ဒေါ်ရင်ရင်မြင့်တို့ရဲ့ ကျမ်းစာအုပ် တွေကိုလဲ အလားတူ တန်ဘိုးထားရမှာပါ၊
နှစ်ပေါင်းများစွာ အဓွန့်ကြာရှည်ခံနိုင်မှု ကို၎င်း၊
ဒေါ်ရင်ရင်မြင့်ရဲ့ မိဘတွေကတော့ ရန်ကုန်မြို့ ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်း
အောက်လမ်း နေခဲ့တဲ့ နံမယ်ကျော် ရွှေတီးဆပ်ပြာစက်ရုံပိုင်ရှင်
ဦး တန်ဖိတ်ဟု နဲ့ ဒေါ် ချီကမ်းတုန် တို့ဖြစ်ကြပြီး၊
မြန်မာပြည်ဖွား တရုပ်အနွယ် တွေပါ၊
ငယ်နံမယ် က တန်ဘိန်ကြုံး ပါ၊
မိမိတို့ရဲ့ စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကို ပြည်သူပိုင်သိမ်းခံရပြီး နောက်ပိုင်း၊
ပြင်သစ်မှာ နှစ်ပေါင်း (၄၁) နှစ် ထက်မနဲ
သူက ပြင်သစ်နိုင်ငံက နိုင်ငံခြားဘာသာသင်တန်း တက်ကသိုလ် မှာ
မြန်မာစာပေဋ္ဌာနရဲ့ တွဲဘက်ဋ္ဌာနမှူး ရာထူးနဲ့ မြန်မာစာကို
ဒေါ်ရင်ရင်မြင့်ရဲ့ခင်ပွန်းက ဟောင်ကောင် သတင်းစာ
သားက အထက်တန်း ကွန်ပြူတာ အင်ဂျင်နီယာ၊
သားသမီး နှစ်ဦးစလုံးဟာ US ယူအက်စ်
ထိပ်သီး တက်ကသိုလ်တွေ ကနေ အောင်မြင်ကြတာပါ၊
ပြင်သစ်နိုင်ငံက နိုင်ငံခြားဘာသာသင်တန်း တက်ကသိုလ်
Institut National des Langues et Civilizations Orientales –
INALCO (known as LanguesO’),2Rue de Lille, 75343, Paris, France.
Phone +33 (1) 49 26 44 20 Fax +33 (1) 49 26 42 57.
Courses in Burmese language, literature and linguistics are taught by Mme Marie-HŽl’ne Cardinaud or
Mme Yin Yin Myint. See the Inalco website for full details of teaching programmes available:
၁၉၇၂ တုန်းက ဒေါရင်ရင်မြင့်က ပြင်သစ်ကို ရောက်ရှိလာပြီး
အဲဒီ တက်ကသိုလ်မှာ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို
စ တင် သင်ကြားပို့ချ ခဲ့တာ
In 1972, in order to continue language instruction at the
together with Marie-Hélène Cardinaud,
Daw Yin Yin Myint arrived from Burma.
၁၉၉၀ ကထဲက စာအုပ် ထုတ်
Asaresult of their collaboration together with Denis Bernot,
the first Burmese language textbook was published in French:
Bernot,D., M-H Cardinaud,and Yin Yin Myint, Manuel de birman,
langue de Myanmar (Paris: L’Asiathèque, 1990).
၁၉၉၃ မှာ နောက် တအုပ်
It was followed in 1993 by Parlons birman, by
Cardinaud, M-H, and Yin Yin Myint (Paris: L’Harmattan).
၂၀၀၁ မှာလဲ တအုပ်
The same, in collaboration with Denise Bernot, are now completing
a Burmese grammar (end of 2001).
Burmese language instruction currently involves
555 hours per year for the three levels.
Apart from their Manuel de birman, students can also work with audio cassettes,
recorded both in Myanmar and in Paris by Burmese native speakers,
and video cassettes
provided by Daw Yin Yin Myint, who uses them asaliving part
of her teaching of the spoken language.
The library at4rue de Lille in Paris hasacollection of
Burmese-related material that includes
more than three thousand volumes, periodicals, and monographs
in Western languages as well as in Chinese, Japanese,etc.
These books have been collected since the nineteenth century,
long before Burmese had been taught or even studied in France.
As early as in 1952, Denise Bernot had been the first specialist
to work with the Burmese material,
for which she used Duroiselle’s system of transliteration to classify the books.
အမှတ်မမှုားရင်.. မင်းတုန်းမင်းခေတ်က ပညာတော်သင်တွေ ပြင်သစ်လွှတ်တာမှာ.. မြန်မာပြည်ပြန်မလာပဲ.. ပြင်သစ်မှာအခြေချနေသွားတဲ့.. မြန်မာ့အမတ်မင်း.. ပညာတော်သင်တွေရှိတယ်တဲ့..။ ဘယ်ရောက်ကုန်တယ်မသိ..။
အမှတ်ထပ်မမှားရင်.. လွန်ခဲ့တဲ့.. ၁၂နှစ်လောက်က.. ၀က်ဘ်ဆိုက်တခုလုပ်ပြီး မြန်မာစာအုပ်တွေရောင်းဖူးတယ်..။ အဲဒါ.. တရက်မှာAmazon ကဖုန်းဆက်အီးမေးလ်ပို့လာပြီး..”မင်းသားလေး”ဆိုတဲ့ ပြင်သစ်ကနေမြန်မာဘာသာပြန်စာအုပ်တွေ အများကြီးမှာဖူးတယ်..။ ရန်ကုန်ကတဆင့်မှာပေးခဲ့ဖူးတာပေါ့…။
အဲဒါ… တလောကတင်.. အဲဒီဘာသာပြန်ဆရာမဒေါက်တာခင်လေးမြင့်လည်း ကွယ်လွန်သွားတာဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်..။
သူတို့တွေမလုပ်နိုင်တဲ့.. အလုပ်ကို.. မြန်မာဇာတိနွယ်တဦးကစွမ်းဆောင်ပေးတာ.. ဂုဏ်ယူပါတယ်လို့..။
ခုလထွက်မယ့်.. သတင်းစာထဲ “ဂုဏ်ယူစရာမြန်မာကဏ္ဍ”မှာဓါတ်ပုံ ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြပါမယ်လို့..။ ခွင့်ပြုချက်လေးတောင်းပေးနိုင်မလားလို့..။
ခုလထွက်မယ့်.. သတင်းစာထဲ “ဂုဏ်ယူစရာမြန်မာကဏ္ဍ”မှာဓါတ်ပုံ ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြပါမယ်လို့..။….”
အားပေး ထောက်ခံ ပါကြောင်း
သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေက Long Distance အဝေးပြောဖုံးနဲ့
တချို့GTy အမှတ်အသားနဲ့က Getty Images ကပိုင်ပြီး၊
တချို့ဟာက မြန်မာသမတရုံး Facebook ဝက်ဒ်ဆိုက်
ကပါ၊ (Mizzima News လဲ အဲဒီက ရတာပါ၊)
ပုံတပုံ က France24 ပြင်သစ်အသံလွှင့်ရုံကပါ၊
စာအုပ်အကြောင်း ဓာတ်ပုံတွေ က
INALCO က ပါ၊
(သူတို့အတွက်လဲ ကြော်ငြာ အချောင်ရလို့ဘဲ)
မှုန်ဂျီး အပိုတွေ သာလိကာ လုပ်မနေနဲ့.. ကိုကိုကြောင်ကြီး မှန်ကြည့်စရာ မရှိလို့ ကြေးမုံခဏ ငှားချင်တယ်.. ဖြစ်ရင် အကြောင်းပြန်.. မပြန်ရင် လာလုမည်။
သူကြီးလိုပဲ အမှတ်မမှားရင်တော့ ရွှေတီးဆပ်ပြာစက်ရုံအဆက်အနွယ်တွေက အခု ဗျူတီခေါင်းလျှော်ရည်လုပ်နေတယ်လို့ သိထားပါတယ်။
ရန်ကုန်မှာ သူ့အမျိုးတွေ ရှိနေပါသေးတယ်။